सबै भन्दा ठूलो बाँदर, अमेरिका फेला जुन, यो हस्यास्पद भूल। साथै, यो प्राइमेट्स सबैभन्दा उच्च-प्रोफाइल प्रतिनिधिको छ। यो आफ्नो तेज रुन धन्यवाद, तिनीहरूले आफ्नो नाम प्राप्त छ।
हस्यास्पद भूल बाँदर: विवरण र विशेषताहरु
परिवार Cebidae हस्यास्पद भूल बाँदर सबै भन्दा ठूलो हो। तिनीहरूले 70 सेमी को एक औसत बढ्न। पुच्छर शरीर रूपमा लगभग एउटै लम्बाइ छ। वयस्क बाँदर आठ किलोग्राम सम्म वजन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्यास्पद भूल जो रंग विकल्प को एक किसिम हुन सक्छ लामो कपाल, ढाकिएको। साथै, यी प्राइमेट्स धेरै घाँटी pouches विकास छन्।
हस्यास्पद भूल बाँदर शक्तिशाली tusks र अलिकति अगाडी धक्का भएको एक चिबुक अलग छ। यो सुविधा मुद्दहरुलाई भयानक दृश्य दिन्छ। बाँदर अनुहार कुनै बाल छ, तर यो दारी छ। प्रत्येक पशु गरेको पन्जा समतल नङ संग पाँच बुझ्दा औंलाहरु संग endowed छ।
रातो हस्यास्पद भूल र मध्य अमेरिकी: वैज्ञानिकहरूले जो सबैभन्दा साधारण दुई howlers, को पाँच प्रकार वर्णन गर्नुहोस्।
फोटो हस्यास्पद भूल बाँदर कसरी शक्तिशाली आफ्नो पुच्छर छन् देखाउँछ। यो यी पशुहरू जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण अंग हो। तिनीहरूलाई लागि, पुच्छर थप हात बाँदर फल र पात बांधन गर्न स्वतन्त्र छन् भन्ने छ। साथै, उहाँको मदत संग आफ्नो शावक stroked वा बिस्तारै नातेदार छुनुहोस्। तर बाहिर, हस्यास्पद भूल पुच्छर यसलाई सजिलै बाँदर को वजन withstands कि त्यो headfirst शाखा एकछिन पर्ख निर्णय गर्दा त शक्तिशाली छ।
यो शरीर को यो भाग एक असामान्य उपस्थिति छ उल्लेख गर्न सकिन्छ। भित्री पक्ष मा पुच्छर को आधार तल, यो जो कुनै कोट मा एक क्षेत्र हो। बरु, त्यहाँ छाला मा ढाँचाहरू, र साना scallops छन्।
हस्यास्पद भूल बाँदर आर्द्र जंगल, केन्द्रीय र ल्याटिन अमेरिका को पहाडी क्षेत्रमा स्थित inhabits। 40 प्राइमेट्स - जो अलग-अलग परिवार जीवित व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ लगभग 15 छन्। यस्तो समुदाय एक पुरुष र महिलाहरुको पुर हुन सक्छ। तर प्राय यो एक परिवार, जहाँ विभिन्न उमेर धेरै पुरुषहरु, साथै महिलाहरुको।
यो आफ्नो स्टेपल आहार को भाग हो किनभने सूचना, जहाँ एक मृगौला, रसदार पात, बीउ, फूल छ रूखहरू, मा हुन सक्छ। यी बाँदर को मुख्य व्यवसायों गर्जन र खुवाउने छन्। nightfall मा, प्राइमेट्स हुनत केही व्यक्तिहरूलाई सपनामा पनि चिच्याउने गर्न सक्षम छन्, सुत्न जाने।
विशाल रूखहरू मुकुट मा खडा बाँदर को सम्पूर्ण बथान, को "कन्सर्ट" पाहुना जो सूर्योदय मा हरेक दिन। मुख्य पाठ गर्न अघि बढ्नु अघि, प्राइमेट्स ध्वनि बिना हाँगाहरू मा आराम बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ। बलियो सबै तिनीहरूले बलियो शाखा को पुच्छर राख्न प्रयास गर्नुहोस्। एक पटक सबै तल आराम संकेत बस्न, र soloists, विशाल पुरुषहरु गर्जन गर्न थाल्छन्।
हस्यास्पद भूल बाँदर को यो कराउँदै प्रतियोगिता जस्तो हरेक पुरुष संघर्ष आफ्नो घाँटी inflates र आफ्ना सबै सक्छ संग चीखें गर्दा। एकै समयमा तिनीहरूले गम्भीर छन् र ध्यान छिमेकी हेर्न। तर एक समय पछि, आवाज को यो कराउँदै "साधारण" बाँदर, चर्को chorus गठन थपियो। यो गर्जन सारा किलोमिटर मा श्रव्य भयो। तर यो शो लामो पछिल्लो गर्दैन। पाँच मिनेट भित्र, उच्चतम बिंदु सम्म, को गर्जन रोकियो। अब प्राइमेट्स अर्को गीत लागि बल भेला गर्न नास्ता खान सक्छ।
lunchtime गरेर, परिवार thicket मा खाना लागि जान्छ। बाँदर को फोटो हाम्रो लेख उपलब्ध छन्, एक बथान चित्रण गरिएको छ। देर दिउँसो बल पाउन, परिवार आफ्नो कन्सर्ट, तेजस्वी सेरोफेरो पुन: सुरु हुन्छ। तर यो पुरुषहरु सबै दिन चिच्याउने गर्न सक्ने टिप्पण लायक छ।
किन यति ठूलो स्वरमा र के को लागि हो?
यो प्रश्न लामो हस्यास्पद भूल बाँदर emits कि गर्जन सुनेका गर्ने यात्री, आग्रह गरिएको छ। समय, को प्राइमेट अनुसन्धानकर्ताहरूले संरचना guttural पशु बैग, resonators जस्तै धेरै पटक सक्षम एक स्तनधारी प्रकाशित जो ध्वनि, बृद्धि गर्न भेट्टाए अध्ययन गर्न।
तर संगीत हस्यास्पद भूल केवल यति, र धेरै उद्देश्य राखे। पहिलो - त्यसैले तिनीहरू महिलाहरुको नजरमा थप आकर्षक बन्न गर्छन। दोस्रो - यो क्षेत्रमा तिनीहरूलाई पर्छ कि, सम्भावित शत्रु र प्रतिद्वन्द्वी देखाउन। तसर्थ, यो आफ्नो परिवार गाइरहेका देशमा रक्षा गर्न अभिप्रेरित छ। तर, यो बावजुद, अंतर-जनजातीय लडाई ठाउँ नियमित रूपमा लिन्छन्। तथ्यलाई पुरुषहरु बीच त्यहाँ महिलाहरुको लागि गम्भीर प्रतिस्पर्धा छ भन्ने छ। त्यसैले, महिला जोडीलाई गर्न तयार छ जब, र कल गर्न उनको परिवार मा कुनै एक जवाफ छैन, यसलाई अर्को पुरुष को ध्वनि सुनाउँछन्।
हस्यास्पद भूल बाँदर CUB बारेमा 190 दिन फलाउँछ। बच्चालाई जन्म भएपछि, उहाँले मेरो आमाको कपाल पकड लिन्छ। त्यसैले pipsqueak लामो समय को लागि नर्स पछि बस्नेछ। अक्सर जवान बाँदर 24 महिना उनको आमा सँगसँगै। तर जवान पुरुष यौन परिपक्व बन बित्तिकै, यो परिवार देखि banished। यो जवान नयाँ चरण प्रवेश गर्न बाध्य छ, र उहाँले विश्वास भने, नेता र तिनका राजकुमार हत्या। कहिलेकाहीं महिलाहरुको नयाँ समूह को खोज मा जा, अभिभावकीय घर छोड।
अन्टार्कटिका: प्रकृति। वनस्पति र अन्टार्कटिका को Fauna
Ojos डेल Salado - विश्व मा उच्चतम ज्वालामुखी
माछा vimba: वर्णन, विकास, रोचक तथ्य र वासस्थानमा
पशु वोल्भेरिन जस्तो देखिन्छ? वोल्भेरिन: वर्णन, उपस्थिति र नंग्रा
क्रुसको देखि Rubens 'मूल "- एक धार्मिक Penance
Bedouin चिया। मार्मारा (चिया Bedouin)
वजन लागि कैफीन संग र्याप: समीक्षा
Currants मा लाईकीराको कसरी लड्न: व्यावहारिक सल्लाह
खुसी मोडेल र डीजे Darya Malygina
को Karachai मान्छे को आचरण - इतिहास। को Karachai मान्छे को शोकमा
Mortal Kombat X. मोरला कोomb एक्स को वर्ण
क्षति को आत्म हटाउन सम्भव?
लेक Balaton को युद्ध, "स्प्रिंग Awakening"